Magaalada Shekosh oo Dab Guri ka Kacay Deedna Hulaaqay Dad ku Dhinteen – Rasaasa News
Feb 19, 2010 dab, shekosh
Shekosh – [r] – Wararka ka imanaya magalada Shekosh ayaa sheegaya in maalinkii shalay ahayd 17/02/2010, xili hadhimadii ah uu dab ka kacay guri ku yaal mid ka mid ah xaafadaha magaalada Shekosh, dabkaas oo kolkii dambe ku fiday xaafado dhawra ayaa sababay dhimasho dad iyo burbur hanti.
Sida uu warku sheegayo dabkan ayaa keenay dhimasho dad iyo gubasho guryo, ka dib kolkii uu ku fiday xaafad isku raran ah oo lagu dagay cabir la,aan. Dadka ku dhintay dabkan ayaa u badan caruur yar yar ah oo hurday guryo ka mid ah xaafada uu dabku halaakeeyey.
Dad la xidhiidhay dad degan magaalada shekosh ayaa waxay noo sheegeen in dad xoogaa ah iyo hantibadan uu dabkaasi baabi,iyey. Ma jiraan wax gargaar ah oo meelna ka soo gaadhay dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay dabka. Dadweynaha magaalada Shekosh ayaa si xoog leh uga qayb qaatay bakhtiinta dabkan iyaga oo isticmaalaya baaldiyo biyo ah iyo caleemo qoyan.
Degmada Shekosh ayaa waxay la qaybsataa magaalooyinka dhulka Somalida Ogadeeniya degaamayn la,aanta [master plan], sidaasi daraadeed ayey fududahay in kolka uu dab ka kaco uu gaysto khasaare xoog leh.
Hada ka hor ayaa dab ka kacay xaafad magaalada Dhanan ay dad badani ku waxyeeloobeen.